Kusho ukuthini ukuzithemba? Incazelo encwadzini yezezimali
Qala ukubolekisa Wiki simo esishubile
Okthoba 16, 2017
Kusho ukuthini ukuzithemba?
Ku- simo esishubile Yindawo eguqukayo edlala indima enkulu emnothweni.
Ngakho-ke, isikhathi sohlu lokuguquguquka sinendima enkulu. Ukwehluleka kuthinta amanani okugcina izimpahla, amanani entengo, amanani entengo noma ama-fund fund. Yinani lembalo elingashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Ukungazenzeki kuthinta abantu abafuna ukutshala izimali.
Isibonelo, uma ufuna ukuvula isikhwama, kufanele uqaphele ukuthuthukiswa okuye kwenzeka ngenyanga edlule. Izithakazelo zentshisekelo zingashintsha njalo. Ngesikweletu, ngokuvamile kuyisibonelo sokubeka isithakazelo kusukela ekuqaleni. Noma kunjalo, kungenzeka kube nokushintshashintsha. Ikakhulukazi ezinkampanini zomshuwalense, izinga lesithakazelo samanje lilungiswa njalo ngonyaka. Ngakho-ke kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukubheka amazinga ezithakazelo. Uma ufuna, ungathola futhi ulwazi mayelana nokuthi amazinga ezenzalo aziphathe kanjani ngesikhathi esifanele.
Ukuzithemba kudlala indima enkulu ezweni lebhange futhi omunye kufanele azitshele yena. Umcebisi webhange uqobo uyothintana naye lo mbuzo. Uhlu lokushintshashintsha akufanele lube lukhulu kakhulu. Ukuzithoba kufanele kuhlale kucatshangelwa ngokucophelela. Akekho okufanele abe ne-blue eyed futhi nje asayine into enhle kakhulu. Uma unemibuzo, kufanele uxoxe ngaso sonke isikhathi ngokuqondile. Ngaphambi kokuvulwa kwesikhwama, kungenzeka futhi ukubala ukuzithemba kwekusasa. Nakuba le nzuzo akuyona yonke into enembile, ingasetshenziswa. Ngakho nakanjani unesici futhi wazi ngokushesha ukuthi yini okufanele uhileleke kuyo. Inani elilinganiselwe lingasethwa. Ngokwehlukana, ingozi nayo ihlala indima enkulu. Akufanele ushiye lutho ngengozi futhi uzivikele njalo ezinhlangothini zonke. Leli nani kufanele lihlolwe njalo futhi ligcinwe engqondweni. Uma ungajwayele, kufanele ugcine izandla zakho.
Yebo ungahlala uthola ulwazi oluthe xaxa nocwaningo. Ukuzithemba kubalulekile embonini yasebhange futhi kuvame ukufakwa kuzo zonke izinkokhelo. Manje, uma ungumuntu ofuna ukubolekisa imali elula, akudingeki ukhathazeke ngokuthi unokuthile okuphathelene nalo. Kodwa-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu osebenza embonini yasebhange azise ngokwazo ngale ndawo. Kuthiwa ukuthi isikhwama esikhulu sikhuphuka, siyancipha kakhulu. Kufanele ukhokhise okuningi uma ufuna ukubolekisa imali, noma ungene ngemvume. Ngakho-ke, kuhlale kubalulekile ukwenza i-aphoyintimenti nomeluleki wakho webhange. Lokhu ngokuqinisekile kuzokwazi ukuchaza ukuthi leli gama lisho ukuthini ukungalungi. Kufanele uhlale ubheka ngokucophelela futhi akufanele nje usayine okuthile.
Yilabo kuphela abafunda ngokuzayo kamuva ngeke babe nengozi. Ngokuvamile sekwephuzile kakhulu ukufunda izivumelwano futhi hhayi ukubhekana nemigomo ethile. Ngakho-ke, kuhlale kulungile ukuhlola nokubona konke kusengaphambili. Ukuzithoba akufanele kususwe ngengozi. Leli gama liyingxenye ebalulekile yezimali. Njengomboleki ojwayelekile, akunandaba.
Isihloko sangaphambiliniTrust oda